Xilliga uurka, waxaan kaa codsaneynaa inaad ku xaddiddo qaadashadaada daawooyinka fiitamiinada dhalmada ka hor iyo kuwa daawooyinka ah ee xafiiskayagu oggolaaday.
Waxaa laguu qoraa daawo fiitamiinada dhalmada ka hor, iskudarka fiitamiinada badan iyo birta. Qaado hal fiitamiin ah dhalmada ka hor maalin kasta. In kasta oo ay jirto nafaqo ku filan, qaadashada cuntadaadu ma qancin karto baahida uurka.
Gargaarka Cudurrada Neefsashada Sare
Caawinta astaamaha ee infekshannada neef mareenka sare, waxaan kugula talinaynaa Sudafed caadi ah® ciriiriga, Robitussin DM® qufac, Tylenol® xanuun yar iyo xanuun, iyo qandho, iyo cune xanuun cunaha. Waxaan kugula talineynaa inaad iska ilaaliso asbiriinka iyo asbiriinta ay ku jiraan alaabada inta aad uurka leedahay.
Gargaarka Qandhada Heerka-hoose, Madax-xanuun, Xanuun yar iyo Xanuun
Waxaan kugula talineynaa acetaminophen (Tylenol®) qandho darajo hoose, madax xanuun iyo xanuuno yar yar. Waxaan kugula talineynaa inaad iska ilaaliso asbiriinka iyo asbiriinta ay ku jiraan alaabada inta aad uurka leedahay.
Si kastaba ha noqotee, haddii heerkulkaagu gaaro 101 digrii ama ka sareeya, ama haddii astaamaha ay sii socdaan, fadlan nala soo xiriir.
Waxaan door bidnay inaad iska ilaaliso daawooyinka lallabbada xilliga uurka. Lalabbo waa astaamo caan ah oo caadi ah, oo badanaa lagu xakameyn karo cunista cunno yar, soo noqnoqod leh iyo cunista cunnooyinka xunxun sida rooti, ​​buskudka, Jell-o®, iyo cabitaanka kaarboonka leh heerkulka qolka.
Xaydha iyo cuntooyinka basbaaska leh ayaa ugu fiican in laga fogaado haddii aad lallabbo. Nasiib wanaagse, lallabbo badanaa waxay xallisaa qiyaastii 14-16 usbuucyo uur ah.
Haddii aad la il daran tahay matag joogto ah oo soo noqnoqda, markaa waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagugu daaweeyo daawo sida Zofran® ama Phenergan®. Daawooyinkaan si fiican ayaa loo darsay waxaana loo dareemay inay ubad qabaan uurjiifka.
Ufiinta Qalbi xanuunka
Laabjeexa waxaa lagu nafisiin karaa cunista cunto fudud oo yar oo qanjir ah iyo adoo madaxaaga kor u qaadaya markaad nasaneyso. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan kuu tahay inaad isticmaasho antacid sida Tums®, Maalox®, Riopan®, ama Gaviscon®.
Alka-Seltzer® waa in laga fogaadaa xilliga uurka, maadaama ay ku jirto asbiriin.
Dr. Alexandra Schueler Dr. Amy W. Rahl Dr. Carrie Soder Dr. Lauren Sagaria Dr. Joanna Buell Dr. Ann Marie Wurst Dr. Kevin Hackett Dr. Erika Boothman Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville Daryeelka Dumarka Fiican Guudmarka Uurka